Career Networking Fair by CEBSD | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Career Networking Fair by CEBSD
Posted on February 22, 2018 by MYEO in Events, Local //0Comments
Deadline : 23 February,2018
Location : Parami Road,CEBSD,Yangon
Duration : 10am-4pm(24 February,2018)(Saturday)
Description : အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေပြီး သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်ကဏ္ဍတွေအကြောင်း လေ့လာလိုတဲ့ ဘွဲ့ရလူငယ်များ၊ ကျောင်းသားများအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမဲ့ Career Networking Fair မှာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ကဏ္ဍအသီးသီးက ကုမ္ပဏီကြီးများရဲ့ booth တွေမှာ တိုက်ရိုက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်မယ်။ Internship / Volunteering အစရှိတာတွေကို စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်လဲ NGO/INGO အဖွဲ့ တွေရဲ့ booth တွေမှာ စုံစမ်းသိရှိ နိုင်မယ်။ မိမိရဲ့ CV ကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရေးသားသင့်သလဲ မျှဝေပေးသွားမဲ့ ‘CV Tailor Workshop’ လေးပါ။
CEBSD ရဲ့ သင်တန်းသားဟောင်းများမှ ၎င်းတို့ရဲ့ scholarship ရရှိခဲ့ပုံ၊ အလုပ်ရရှိခဲ့ပုံတွေကို မျှဝေပေးသွားမဲ့ ‘Youth to Youth’ sharing session
လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေသူတွေက လုပ်ငန်းခွင် သဘာဝတွေ၊ အဲဒီနယ်ပယ်မှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့ သိထားရမဲ့အချက်တွေကို လာရောက် မျှဝေပေးသွားမဲ့ ‘Get to know the Sectors’ အစီအစဉ် တွေလည်း ပါဝင်မှာပါ။
ပါဝင်မဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကတော့ MPRL E&P,MCB Bank,PepsiCo,IKON တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Career Fair ကို တက်ရောက်လာသူများ အတွက် အစားအသောက်နဲ့ အမှတ်တရ ပစ္စည်းများလည်း စီစဉ်ပေးထားပါတယ် (while stock lasts).
*တက္ကသိုလ် အသီးသီးမှ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့ရ လူငယ်များ အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီများနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက် အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့လဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မှာပါ။
*အလုပ်လျှောက်မဲ့ လူငယ်များကတော့ မိမိတို့ရဲ့ CV ကို တပါတည်း ယူလာပြီး ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ booth တွေမှာ လျှောက်ထားနိုင်မှာပါ။
*ဒီပွဲကို နံနက် ၁၀ နာရီက နေ ၄နာရီ အတွင်း CEBSD မှာ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပြီး လူငယ်တွေအတွက် အစီအစဉ် ကောင်းများစွာလည်း ပါဝင်တာမို့ ကိုယ့်အနာဂါတ် အလုပ်အကိုင်အတွက် အချိန်တစ်ရက်ယူပြီး လာတက်ရောက်သင့်တဲ့ပွဲပါ။
To see original post,you can visit HERE.
Description :အလုပျအကိုငျရှာဖှနေပွေီး သကျဆိုငျရာ လုပျငနျးခှငျကဏ်ဍတှအေကွောငျး လလေ့ာလိုတဲ့ ဘှဲ့ရလူငယျမြား၊ ကြောငျးသားမြားအတှကျ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၄ ရကျနမှေ့ာ ပွုလုပျသှားမဲ့ Career Networking Fair မှာ လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လုပျငနျးခှငျ ကဏ်ဍအသီးသီးက ကုမ်ပဏီကွီးမြားရဲ့ booth တှမှော တိုကျရိုကျ တှဆေုံ့မေးမွနျးပွီး အလုပျလြှောကျထားနိုငျမယျ။ Internship / Volunteering အစရှိတာတှကေို စိတျပါဝငျစားတဲ့ လူငယျတှအေတှကျလဲ NGO/INGO အဖှဲ့ တှရေဲ့ booth တှမှော စုံစမျးသိရှိ နိုငျမယျ။ မိမိရဲ့ CV ကို ဘယျလိုပွငျဆငျရေးသားသငျ့သလဲ မြှဝပေေးသှားမဲ့ ‘CV Tailor Workshop’ လေးပါ။
CEBSD ရဲ့ သငျတနျးသားဟောငျးမြားမှ ၎င်းငျးတို့ရဲ့ scholarship ရရှိခဲ့ပုံ၊ အလုပျရရှိခဲ့ပုံတှကေို မြှဝပေေးသှားမဲ့ ‘Youth to Youth’ sharing session
လုပျငနျးခှငျ နယျပယျအသီးသီးမှာ ဦးစီးလုပျကိုငျနသေူတှကေ လုပျငနျးခှငျ သဘာဝတှေ၊ အဲဒီနယျပယျမှာ ဝငျရောကျလုပျကိုငျဖို့ သိထားရမဲ့အခကျြတှကေို လာရောကျ မြှဝပေေးသှားမဲ့ ‘Get to know the Sectors’ အစီအစဉျ တှလေညျး ပါဝငျမှာပါ။
ပါဝငျမဲ့ ကုမ်ပဏီတှကေတော့ MPRL E&P,MCB Bank,PepsiCo,IKON တို့ဖွဈပါတယျ။
Career Fair ကို တကျရောကျလာသူမြား အတှကျ အစားအသောကျနဲ့ အမှတျတရ ပစ်စညျးမြားလညျး စီစဉျပေးထားပါတယျ (while stock lasts).
တက်ကသိုလျ အသီးသီးမှ ဘှဲ့ကွို၊ ဘှဲ့ရ လူငယျမြား အနနေဲ့ ကုမ်ပဏီမြားနဲ့ တိုကျရိုကျခြိတျဆကျ အလုပျလြှောကျထားနိုငျပွီး နယျပယျအသီးသီးမှ ကြှမျးကငျြသူမြားနဲ့လဲ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးနိုငျမှာပါ။
*အလုပျလြှောကျမဲ့ လူငယျမြားကတော့ မိမိတို့ရဲ့ CV ကို တပါတညျး ယူလာပွီး ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ booth တှမှော လြှောကျထားနိုငျမှာပါ။
*ဒီပှဲကို နံနကျ ၁၀ နာရီက နေ ၄နာရီ အတှငျး CEBSD မှာ ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပွီး လူငယျတှအေတှကျ အစီအစဉျ ကောငျးမြားစှာလညျး ပါဝငျတာမို့ ကိုယျ့အနာဂါတျ အလုပျအကိုငျအတှကျ အခြိနျတဈရကျယူပွီး လာတကျရောကျသငျ့တဲ့ပှဲပါ။